RP2နှစ်အလုပ်လုပ်မိတ္တူ | Data Recovery
LC Technology Int'l | recovery ကို Software များ & န်ဆောင်မှုများ
RP2နှစ်အလုပ်လုပ်မိတ္တူ
နေအိမ် → RP2နှစ်အလုပ်လုပ်မိတ္တူ
ဤစာမျက်နှာကိုအတွက်သင့် browser ဘာသာစကား detect ပါလိမ့်မယ် 12 ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားမှာဘာသာစကားများနှင့် display ကို.
သင်၏ဘာသာစကားပြသသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, အင်္ဂလိပ်စာမကျြနှာဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ သင့် browser ကိုအားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါသည်.
2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPRID serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူပေါ်တွင်သင်၏ညွှန်ကြားချက်.2. ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်အောက်ကခလုတ်ကို、သင်၏ operating system အညီကို select ပေးပါ。3. အဆိုပါ RPRID serial number ကိုသုံးပါ、activation code ကိုရကျေးဇူးပြုပြီး。အဆိုပါရရှိရန်မည်သို့ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် ယင်းစစ်ဆေးပါ。
2. သင်၏ operating system များအတွက် button ကို select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.. ဒါဟာ button ကိုရွေးချယ်ထားဝယ်ယူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတည်ရှိသည်.3. သင့်ရဲ့ serial number ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ activation code ကိုခံယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် RPRID, အလည်အပတ် LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်2. သင်၏ operating system ကိုရှေးခယျြဖို့ခလုတ်အောက်တွင်တည်ရှိရွေးချယ်ထားကူပွန်တဦးကိုရွေးချယ်ပါ.3. Lea မှာ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် ညွှန်ကြားချက်က၎င်း၏အမှတ်စဉ်အရေအတွက်အားဖြင့်တစ်ဦး activation code ကိုရယူရန်အဘို့အ RPRID.2. သင့်ရဲ့ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်အောက်ကခလုတ်များ၏တဦးတည်းကို select ပေးပါ, သင်၏ operating system ကို entsprichtt.3. အဆိုပါဖတ်ရှုပါ LC Tech မှ activation process ကိုညွှန်ကြားချက် နှင့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ, သင့်ရဲ့ RPRIDzu သုံးပြီး activation code ကို serial number ကိုလက်ခံရရှိ.2. ကနေသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု Make、သင်၏ operating system တစ်ခုကိုရှေးခယျြဖို့သက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူကူပွန်ကိုအောက်တွင် button。3. အဆိုပါ activation code ကိုရယူဖို့ Serial Number ကို အသုံးပြု. တဲ့အခါမှာ RPRID，သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆက်စပ်ကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု.LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်。 2. သင်အသုံးပြုနေသော operating system ကိုပေါ် မူတည်. ကူပွန်ကို select ဖို့အောက်ကခလုတ်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါ.3. သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့အကြောင်း RPRID
LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်ယင်းကိုသွားရောက်ဖတ်ရှုပါ. 2. သင်တို့ကိုရွေးကောက်သထားသောကူပွန်အောက်ကခလုတ်များ၏တဦးတည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ, သင်၏ operating system ကိုကိုက်ညီ.3. ဖတ်ရှုပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် အဆိုပါနံပါတ်စဉ်နဲ့ activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့ညွှန်ကြားချက်များအတွက် RPRID.2. သင်ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်အောက်ပေါ်လာသောခလုတ်တွေထဲမှာ, သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီသော button ကို Select လုပ်ပါ.3. အဆိုပါရည်ညွှန်းကိုးကား LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် activation code ကိုများအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကြည့်ဖို့ သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်မှတဆင့် RPRID.2. ကြေးဇူးပွုပွီး, ရွေးချယ်ထားသောကူပွန်ကလစ်အောက်မှာ, သင်၏ operating system မှသင့်လျော်သော.3. ကြေးဇူးပွုပွီး, အဆိုပါဖတ်ပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် တစ်နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့ညွှန်ကြားချက်များအတွက် RPRID.
2. သင်၏ operating system နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းရွေးချယ်ထားသောဘောက်ချာအောက်ကခလုတ်များ၏တဦးတည်းကို select ပေးပါ.3. စစ်ဆေးပါ LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် အဆိုပါအတိုကောက်ကုဒ်တွေနဲ့စတင်ကြောင်းကိုသင်၏ serial number ကို အသုံးပြု. activation ရတဲ့အပေါ်ညွှန်ကြားချက် RPRID.2. ကြေးဇူးပွုပွီး, သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်ကူပွန်ဖို့အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ.3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့အပေါ်သူ၏ညွှန်ကြားချက် RPRID.2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီတရွေးဖို့အောက်ကသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်ခလုတ်ကို။3. ဆန်းစစ်ခြင်း LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPRID serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူရန်သင့်ညွှန်ကြားချက်။
Windows ကို Software များ
2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPSSD serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူပေါ်တွင်သင်၏ညွှန်ကြားချက်.SSD ကိုများအတွက်RescuePRO® Deluxe
Windows ကို Software များ Macintosh ဆော့ဝဲ
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဆော့ဖျဝဲကို install ကျေးဇူးပြု., သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run တဲ့အခါမှာ, you will then be prompted to activate your software. သငျသညျထို့နောက် activation page ကို link တစ်ခုပေးထားပါလိမ့်မည်. လင့်ခ်အတိုင်းလိုက်နာနှင့် form မှာဖြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး, RescuePRO®ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်ဖို့ Serial Number တို့ပါဝင်သည်ရန်သေချာစေပါ. activation ဖို့ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
သင်တို့အပေါ်မှာ install လုပ်ပါသောကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်မပါလျှင်, you may email your activation request number to RescuePRO® Support, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အနေနဲ့ Activation Code ကိုပေးနိုင်ပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, အောက်ကခလုတ်မှသင်၏ operating system ကိုရွေးချယ်သင့် operating system များအတွက်ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျပုံစံမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကျေးဇူးပြုပြီး. ဒါမှမဟုတ်တနည်း, ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ (အမေရိကန်) သေဆုံးသူအခမဲ့ (866) 603-2195, သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက် (727) 449-0891. ဥရောပခေါ်ဆိုမှု +44 (0)115 704 3306
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲ Install、ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းသတိပေးခံရခြင်းဖြစ်သည် activated ဖြစ်ပါတယ်、အဆိုပါ activation page ကိုတစ်ဦးက link ကိုပုံပေါ်。link ကိုရဲ့ contents များနှင့်အညီပုံစံအတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ရိုက်ထည့်ပေးပါ。အဲဒီအချိန်တုန်းက、၏RescuePRO® software ကိုအမှတ်စဉ်ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပေးပါ。
အဆိုပါ input method ကိုအသေးစိတ်(အင်္ဂလိပ်)ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.。
သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းချင်သောကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်မပါလျှင်、E-mail ဖြင့်RescuePRO®ထောက်ခံမှုအတွက် activation ၏မေတ္တာရပ်ခံချက်ကိုသွားရောက်ဖတ်ရှုပါ。ကျနော်တို့သီးခြားစီ activation code ကိုပေး。
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဆော့ဖျဝဲကို install ကျေးဇူးပြု.. ဘယ်အချိန်မှာသင်ပထမဦးဆုံးစတင်, သင်သည်သင်၏ software ကို activate လုပ်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ်. သင့်အနေ activation စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်ယူနေတဲ့ link ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်. link ကို click နှိပ်ပြီးပုံစံဖြည့်စွက်ပေးပါ, ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းခံယူဖို့ Serial Number ကိုသတ်မှတ်ရန်သေချာစေပါRescuePRO®.
ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကို Activation ခြေလှမ်းများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
သငျသညျကို install သောကွန်ပျူတာအဘယ်သူမျှမအင်တာနက်ရှိပါက, activation code ကိုလက်ခံရရှိရန်RescuePRO®ပံ့ပိုးမှုမှ activation အရေအတွက်တောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေက.
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, သင်၏ operating system မှသက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကို select နှင့်အဆက်အသွယ်ပုံစံဖြည့်စွက်ကျေးဇူးပြုပြီး, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ (866) 603-2195 (အမေရိကန်အဘို့အသေဆုံးသူ) သို့မဟုတ် (727) 449-0891. ဥရောပများအတွက်, အဆိုပါဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် +44 (0)115 704 3306.
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဆော့ဖျဝဲကို install လုပ်ပြီး, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုတဲ့အခါ, သငျသညျကိုသက်ဝင်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်. ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် activation page ကိုသငျသညျကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်တဲ့ link ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်. link ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ပုံစံဖြည့်စွက်. ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်ဖို့ Serial Number တို့ပါဝင်သည်ရန်သေချာစေပါRescuePRO®.
သင်က install လုပ်နေကြတယ်ကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မပါလျှင်, သငျသညျRescuePRO®ကူညီပံ့ပိုးရန်အီးမေးလ်ဖြင့်သင်၏နံပါတ် activation တောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့နိုင်ပြီးငါတို့သည်သင်တို့အနေနဲ့ Activation Code ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်.
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, အောက်ပါခလုတ်မှသင်၏ operating system ကို select ပြီးသင့် operating system များအတွက်အဆက်အသွယ်ပုံစံဖြည့်စွက်. သင်တို့သည်လည်းအခမဲ့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ် (OF. UU ။) အယ်လ် (866) 603-2195 သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်မှာ (727) 449-0891. ဥရောပတိုက်တွင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်, အမှတ် +44 (0)115 704 3306
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းပေးပါ. သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်က start လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျဟုမေးပါလိမ့်မည်, သင့်ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုသက်ဝင်စေဖို့. သငျသညျထို့နောက် activation page ကို link တစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ဒီ link ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ပုံစံဖြည့်စွက်ပေးပါ. သင့်ရဲ့ serial number ကိုရိုက်ထည့်ရန်သေချာစေပါ, အဆိုပါRescuePRO®Softwareသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်စေဖို့.
အဆိုပါကွန်ပျူတာသည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဆော့ဝဲ install ချိတ်ဆက်မပါလျှင်, သင်ကRescuePRO®ထောက်ခံမှုမှ e-mail, အားဖြင့်သင့်ကို Activation တောင်းဆိုမှုကိုအရေအတွက်ကပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရရှိနိုင် activation code ကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးနိုငျ.
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, သင်၏ operating system အရသိရသည်အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကျေးဇူးပြုပြီး. သို့မဟုတ်တနည်း, မှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ (အမေရိကန်) သေဆုံးသူအခမဲ့ (866) 603-2195 အောက်မှာသို့မဟုတ် site ပေါ်တွင် (727) 449-0891 တစ်ဦး. ဥရောပကနေဖုန်းခေါ် +44 (0) 115 704 3306
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းပေးပါ，သင်ပထမဦးဆုံးဆော့ဖ်ဝဲကို run လိုက်တဲ့အခါ，prompt ကိုလက်ခံရရှိ，သင်သည်သင်၏ဆော့ဖျဝဲကိုသက်ဝင်အားခွင့်ပြု。ထိုအခါ，သငျသညျ link တစ်ခုရလိမ့်မယ်，ဒီ link activation စာမျက်နှာတွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်。လင့်ခ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.，ပုံစံဖြည့်စွက်，သင့်ရဲ့အမှတ်စဉ်နံပါတ်များကိုသေချာပါစေ，ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းကိုသက်ဝင်နိုင်ရန်အတွက်RescuePRO®。 ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ，ကြည့်ရန် activation ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်.
ကွန်ပျူတာကိုသင်အင်တာနက်ကမပါဘဲ software ကို install လုပ်နေတယ်ဆိုရင်，သငျသညျအပလီကေး activation code ကိုကထောက်ခံRescuePRO®မှ e-mail ပို့နိုင်ပါတယ်，ကျနော်တို့အနေနဲ့ activation code ကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးနိုငျ。
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထိတွေ့ရ，အောက်ပါခလုတ်မှသင်၏ operating system ကို select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.，ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ပုံစံများအတွက်သင်၏ operating system ကိုသင့်လျော်သောထည့်သွင်း，ငါတို့သည်လည်း (ယူအက်စ်) သေဆုံးသူ-အခမဲ့ခေါ်နိုင်ပါတယ်(866) 603-2195，သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာတယ်လီဖုန်း(727) 449-0891，ဥရောပ +44 (0)115 704 3306
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ, ပထမဦးဆုံးပြေးပေါ်တွင်ဆော့ဖျဝဲကို install လိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏ဆော့ဖျဝဲကိုသက်ဝင်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်. ထိုအခါ activation page ကို link တစ်ခုလာ. link ကိုအောက်ပါတို့ကပုံစံဖြည့်စွက်ပေးပါ. ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်ဖို့ Serial Number ကိုထုတ်ဖြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီးRescuePRO®
သင်ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်ကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မပါလျှင်, အဆိုပါRescuePRO®ပံ့ပိုးမှုသင်က e-mail, တောင်းဆိုမှုကိုအားဖြင့်တစ်ဦး activation code ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. ထိုကိစ္စတွင်, သင်မှ activation code ကိုပေးနိုင်ပါသည်
တိုင်ပင်ဘို့အောက်ကခလုတ်ကိုမှသင်၏ operating system ကို select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.. သင်၏ operating system ဖို့ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျပုံစံဖြည့်စွက်ပေးပါ. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုအရေအတွက် (ယူအက်စ်အေ)(866) 603-2195 သို့မဟုတ်ဧရိယာကုဒ် (727) 449-0891ဖုန်းဆက်ဖို့အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး. ဥရောပအရေအတွက်ကို +44 (0) 115 704 3306 အဆိုပါ.
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲ Install, သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကို run တဲ့အခါမှာ, သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကိုသက်ဝင်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်. သင့်အနေ activation page ကို link တစ်ခုပေးထားပါလိမ့်မယ်. link ကို Follow နှင့်ပုံစံဖြည့်စွက်, ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်စေဖို့အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုထည့်သွင်းရန်သေချာအောင်RescuePRO®.
တစ်ဦးခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါactivation များအတွက်.
သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကို install ထားတဲ့အပေါ်ကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မပါလျှင်, သငျသညျRescuePRO®ထောက်ခံမှု activation တောင်းဆိုချက်အရသင့်ရဲ့အရေအတွက်ကတင်ပြနိုင်ပါတယ်, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အနေနဲ့ activation code ကိုငါပေးမည်.
ထိတှေ့, အောက်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ operating system ကိုရွေးချယ်ပြီးပုံစံဖြည့်စွက်သင့် operating system အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. သို့မဟုတ်, တနည်း, telefonaci (အမေရိကန်) အစိမ်းရောင်အရေအတွက်ကို (866) 603-2195, ဒေသအလိုက် (727) 449-0891. ဥရောပကိုပဌနာရန်အဘို့အ +44 (0) 115 704 3306
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲ Install, နှင့်၎င်း၏ပထမဦးဆုံး session တစ်ခု, ဆော့ဖ်ဝဲကိုသက်ဝင်သတိပေးခံရ. ထိုအခါ, သင့်အနေဟာ executable မှ link တစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. link ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပုံစံဖြည့်စွက်. ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်စေဖို့ serial number ကိုသတိပြုပါရန်သေချာစေပါRescuePRO®. ဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ စစ်ဆင်ရေးအဆင့်လမ်းညွှန်.
သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကို install နေသောကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မပါလျှင်, သငျသညျ e-mail ပို့နိုင်ပါတယ်”သင်၏လျှောက်လွှာထောက်ခံမှုစစ်ဆင်ရေး၏အရေအတွက်RescuePRO®, ငါတို့သည် activation code ကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးသွားမှာပါ.
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, သင်၏ operating system ကိုအောက်ပါခလုတ်အကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျရှေ့ဆက်မည် (ဆက်သွယ်ရန်) သင်၏ operating system မှသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း. သို့မဟုတ်, ကျွန်တော်တို့ကို Call (အမေရိကန်”တွင်) သေဆုံးသူ-အခမဲ့အရေအတွက်ကို(866) 603-2195, သို့မဟုတ်ဒေသခံတစ်ဦးခေါ်ဆိုခ(727) 449-0891. ဥရောပစကားလက်ဆုံ, +44 Call (0)115 704 3306
ကြေးဇူးပွုပွီး, သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်, သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကိုသက်ဝင်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်. သငျသညျထို့နောက် activation page ကို link တစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ကြေးဇူးပွုပွီး, link ကို click နှိပ်ပြီးပုံစံဖြည့်စွက်, ထို program ၏အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်စေဖို့ serial number ကိုရိုက်ထည့်RescuePRO®. ယင်းဗျူဟာလမ်းညွှန်များအတွက်ဒီမှာ activation process ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို အကယ်., သင် program ကို install လုပ်ထားတဲ့အပေါ်, အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မ, သငျသညျထောကျပံ့အတွက် e-mail ကိုဖွင့်သုံးတောင်းဆိုမှုကိုအရေအတွက်ကပေးပို့နိုင်ပါတယ်RescuePRO®, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့တောင်းဆိုသော activation code ကိုစလှေတျမညျ
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, ကို select, ကြေးဇူးပွုပွီး, အောက်ကသင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ယင်း၏ operating system နဲ့သင့် operating system များအတွက်ကူညီပံ့ပိုးရန်ကုသမှုပုံစံကိုသွား. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုခေါ်နိုင်ပါတယ် (သေဆုံးသူ-အခမဲ့အမေရိကန်အတွင်း) (866) 603-2195, သို့မဟုတ်ဒေသခံတစ်ဦးက extension (727) 449-0891. ဥရောပဖောက်သည်တစ်ဦးအရေအတွက်ပံ့ပိုးမှု +44 (0)115 704 3306
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြေးရသောအခါ, သင် program ကို activate လုပ်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီး. သင်တစ်ဦးစာမကျြနှာကို Activation link တခုကိုပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြီးနောက်. လင့်ခ်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်ပုံစံဖြည့်စွက်ခြင်း, ထို program ၏အခမဲ့ဗားရှင်းကိုသက်ဝင်ဖို့ Serial Number တို့ပါဝင်သည်ရန်သေချာစေပါ ကျေးဇူးပြု. RescuePRO®. activation လမ်းညွှန်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုရဖို့ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
သငျသညျကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပါက install လုပ်နေကြတယ် device ကိုမပါရှိလျှင်, သင်RescuePRO®များအတွက်နည်းပညာပိုင်းပံ့ပိုးကူညီမှုရန်သင့် activation များအတွက်တောင်းဆိုမှုအရေအတွက်ကပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ငါတို့သင် activation code ကိုပေးနိုင်ပါသည်.
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, အောက်ကခလုတ်မှသင်၏ operating system ကိုရွေးကောက်သဖြင့်, မော်ဒယ်မှ-up, နောက်ကိုလိုက်ကျေးဇူးပြုပြီး “ဆက်သွယ်ရန်” သင်၏ operating system များအတွက်. သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းကိုသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသေဆုံးသူ-အခမဲ့အရေအတွက်ကအပေါ်ကိုအဆက်သွယ်နိုင်သည်(866) 603-2195 သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာခေါ်ဆိုခ။(727) 449-0891
ဥရောပကနေချိတ်ဆက်ဖို့: +44 (0)115 704 3306
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကို Install လုပ်ပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို activate လုပ်ဖို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်. သငျသညျထို့နောက် activation page ကို link တစ်ခုပေးထားပါလိမ့်မည်. link ကို Follow နှင့်formuárioအတွက်ဖြည့်ပါ, ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်ဖို့ Serial Number တို့ပါဝင်သည်ဖို့သေချာပါအောင်RescuePRO®.
activation များအတွက်ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
တပ်ဆင်လုပ်နေတာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မသည်အဘယ်မှာရှိကွန်ပျူတာသည်ဆိုပါက, သငျသညျRescuePRO®ပံ့ပိုးမှုအဘို့သင့်ကို Activation တောင်းဆိုမှုကိုအရေအတွက်ကိုပေးပို့နိုင်ပြီးသင်တစ်ဦး Activation Code ကိုအတူပေးနိုငျ
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, အောက်ကခလုတ်မှသင်၏ operating system ကိုရှေးခယျြနှင့်သင့် operating system အတွက်ပုံစံဆက်သွယ်ပါရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်. သို့မဟုတ်, တနည်း, ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကို (ယူအက်စ်အေ), အခမဲ့အရေအတွက် (866) 603-2195 သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက် (727) 449-0891. ဥရောပခေါ်ဆိုမှု +44 (0)115 704 3306
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲ Install, သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run တဲ့အခါမှာ, သင်သည်သင်၏ဆော့ဖျဝဲကိုသက်ဝင်သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ ထိုအခါသင် activation page ကို link တစ်ခုပေးထားပါလိမ့်မည်။ link ကို Follow နှင့်ပုံစံဖြည့်စွက်, ဆော့ဖ်ဝဲသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူRescuePRO®, ကိုသက်ဝင်ဖို့ Serial Number ထည့်သွင်းရန်သေချာစေပါ။ activation အပေါ်များအတွက်ခြေလှမ်း-by-step လမ်းပြဘို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားကြသည်ကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မထားပါ, ဒါကြောင့်သင်က e-mail, သင့်ရဲ့ activation တောင်းဆိုမှုကိုအရေအတွက်RescuePRO®ထောက်ခံမှုမှလုပ်နိုင်, ငါတို့သည် activation code ကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်, အောက်ကခလုတ်မှသင်၏ operating system ကို select ပြီးသင့် operating system အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖွဲ့စည်းရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်တနည်း, ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေး ကျေးဇူးပြု. (အမေရိကန်) သေဆုံးသူအခမဲ့ (866) 603-2195, ဒါမှမဟုတ်ဒေသအလိုက် (727) 449-0891 ခေါ်ရန်။ ဥရောပမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှု +44 (0) 115 704 3306
အကူအညီလိုတယ်? (Windows ကို)
အကူအညီလိုတယ်? (Mac OS X မှာ)
Software များ & န်ဆောင်မှုများ
သင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်အဘို့ကို PC နဲ့ Mac-Data Recovery န်ဆောင်မှုများအဘို့ Data Recovery Software များ
© 2020 LC နည်းပညာအင်တာနေရှင်နယ်,Inc မှ All Rights Reserved
© 2019 LC နည်းပညာအင်တာနေရှင်နယ်, Inc မှ. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ. ကြှနျုပျတို့၏ site သုံးခွငျးဖွငျ့, သငျသညျ cookies များကိုသဘောတူ. ပိုမိုသိရှိရန်